FTTx Pre-sale in Mandalay — MYSTERY ZILLION
FTTx Pre-sale in Mandalay
September 2010 edited September 2010 in Tech News
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထူးဂရုပြု စောင့်မျှော်နေကြသော Fiber To The Home အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာနဲ့ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း မန္တလေးမြို့၌ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် ချထားပေးမည်ဟု Fortune နှင့် RedLink Company တို့မှ ကြားသိရပါတယ်။ လက်ရှိ မန္တလေးတွင် ဤ Company ကြီး နှစ်ခုမှ ဝယ်ယူမည့် Customer များအား ကြိုတင် လျှောက်လွှာ ( FTTx Pre-sale Form ) များကိုဖြည့်ခိုင်းနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ Form ပုံစံတွင် - - Customer Information - Usage ဘာအတွက် အသုံးချမည် ( ဥပမာ - Internet Cafe, Company,Personal အတွက် စသည်ဖြင့်...။ ) - One Time Installation ( Choice 1 - Internet + VoIP ) and ( Choice2"Triple Play" Internet + VoIP + IPTV ) - Bandwidth Plan ( 512 kbps, 1 Mbps,2Mbps,3Mbps,4Mbps, 8 Mbps အထိ ပါဝင်ပါတယ်။ ) - FTTx တပ်ဆင်မှု အပြီးအစီး ကုန်ကျစရိတ်နှုန်းထားများနှင့် လစဉ်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေးနှုန်းထားများကို အောက်တွင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ တပ်ဆင်မှု ဧရိယာ မီတာ ၃၀၀ အတွင်းမှ ကျော်လွန်ခဲ့ပါက သုံးစွဲသူဘက်မှ ကြိုးတန်ဖိုး ကုန်ကျစရိတ် ထပ်မံပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤအထက်ပါအကြောင်းအရာ ဖော်ပြမှုများသည် Fortune Company ၏ FTTx Pre-sale Form ကို ကိုးကား၍ စာဖတ်သူအပေါင်း သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အိုင်တီမန်း(မန္တလေး)
spaceboy wrote: »
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထူးဂရုပြု စောင့်မျှော်နေကြသော Fiber To The Home အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာနဲ့ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း မန္တလေးမြို့၌ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် ချထားပေးမည်ဟု Fortune နှင့် RedLink Company တို့မှ ကြားသိရပါတယ်။
ကြားရတာ သတင်းကောင်းလေးပေါ့ဗျာ Networking လောက ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီထက်မက တိုးတက်ပါစေဗျာ
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. လိုချင်တဲ့ သူများ 78 လမ်း မှာရှိတဲ့ Red Link မှာ သွားပြီး လျောက်လွှာ ဖြည့်ပြီး တင်ထားလို့ ရနေပါပြီ....
ဟိုး.... အရင်ကလည်း ပုဂံကလည်း အဲလိုပါပဲ သူတို့ဆီမှာ စာရင်း လာပေးထားပါဆိုလို့ သွားပြီး စာရင်း ပေးထားတာ အခုတော့ ဘာအသံ မှမကြားတော့ဘူးဖြစ်သွားပါတယ်...
Red Link ကတော့ ဒီနှစ် နှစ်မကုန်ခင်သေချာပေါက် ရမယ်လို့ တော့ ပြောပါတယ်... သေချာ၏ မသေချာ၏ ဆိုတာ ကတော့ စောင့်မျှော် လိုက်ကြရအောင်စို့ဗျာ......
Only Web Portal ဆိုတာက??? ကျနော်ကတော့ Web portal ကိုမြန်မြန်ပီးစေချင်ဘီ။Web portal ပီးရင် ရလာမယ့် နောက်ဆက်တွဲ တွေရှိတယ်။Online Banking,EDGE(2.75G) etc......
မန္တလေးမြို့တွင် FTTx လျောက်ထားဖို့ စီစဉ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် မိမိတို့တပ်ဆင်မည့် နေရာပေါ်မူတည်၍ သွားရောက်လျောက်ထားရမည် Company ခွဲခြားထားပါသည်။
မန္တလေးမြို့ ၇၈ လမ်းကို ပင်မထား၍ ၇၈ လမ်း အရှေ့ဘက်ခြမ်းကို RedLink Company က တာဝန်ယူ တပ်ဆင်မည်ဖြစ်ပြီး၊
၇၈ လမ်း အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုတော့ Fortune Company က တာဝန်ယူ တပ်ဆင်မည်ဟု ကြားသိရပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော်က Information ပေးတာနော်။ ကြော်ငြာနေတာ မဟုတ်ဘူး။ တော်ကြာ အဲဒီကလူ ထင်နေမှာ စိုးလို့။
မန္တလေးမှာ ဆက်သွယ်ရေးက Engineer ချုပ်တွေ FTTx နဲ့ ပတ်သက်ပြီး seminar လုပ်သွားတုန်းက အရင်လိုင်းတွေကို FTTx နဲ့လဲလို့၇မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးတော့???
အင်ဂျင်နီယာချုပ်က လဲတော့ မပေးဘူး။ လိုင်းတွေကို Upgarde ပဲလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ တပ်ဆင်မှု ဧရိယာ မီတာ ၃၀၀ အတွင်းမှ ကျော်လွန်ခဲ့ပါက သုံးစွဲသူဘက်မှ ကြိုးတန်ဖိုး ကုန်ကျစရိတ် ထပ်မံပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ [/B] ဤအထက်ပါအကြောင်းအရာ ဖော်ပြမှုများသည် Fortune Company ၏ FTTx Pre-sale Form ကို ကိုးကား၍ စာဖတ်သူအပေါင်း သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အိုင်တီမန်း(မန္တလေး)
So less than 300m is FTTC (Fiber to the Curb) and greater than 300m is FTTN (Fiber to the Node), I think.
Also wants to know the cable INSTALLATION COST GREATER THAN 300 METERS.
The connection speed of fiber FTTx support by fortune company is minimum 512. The connection is bad. So I upgrade my plan to 1M but the connection is not get full speed even at mid night for many days. I am thinking that the connection is really fiber or not? Fortune is making money from Myanmar customer as real fiber. I heard that the fiber connection is the best in world. For Myanmar Mandalay city, the connection is not as good as WCDMA.